1.testosterone phenylpropionate ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
testosterone လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သောအထီးဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်း majorly ဝှေးအားဖြင့်အမျိုးသားများတွင်ထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒါဟာဟော်မုန်းအဲဒီလူရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတိုးမြှင့်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရိုးထုထည်, ကြွက်သား, သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်လိင် drive ကိုအဖြစ်ယောက်ျားရဲ့ဇာတ်ကောင်, အားလုံး testosterone ဟော်မုန်းများကနှိုးဆွပေးနေကြသည်။ သို့သော် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုများထဲမှအသက်အရွယ်အဖြစ်ချတတ်၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, testosterone ဟော်မုန်းကြွက်သားအဆောက်အဦအတွက်နှင့်အခြားအထီးဝိသေသလက္ခဏာများတိုးမြှင့်ကူညီပေးဖို့ကိုယ်တည်းထဲသို့ထိုးသွင်းကြောင်းတစ်ခုဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုခံစားနေရပြီးမည်သူမဆိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သဘာဝဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်အောင်အတွက်ကူညီရန် testosterone ဟော်မုန်းယူရန်အကြံပြုထားသည်။
testosterone phenylpropionate (1255-49-8) အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်ခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီကအသုံးပြုကြောင်းတစ်ခုဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုံအလောက် testosterone ဟော်မုန်းမရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်လိင်စိတ်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးပြဿနာများ, အနိမ့်သုက်ပိုးပါဝင်မှုနှုန်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပြီး, ဆယ်ကျော်သက်စဉ်အတွင်းအထီးနက်ရှိုင်းသောအသံသည်နှင့်တူဝိသေသလက္ခဏာများ, မုတ်ဆိတ်, ဒါမှမဟုတ်ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ကြွက်သားအဆောက်အဦး၌သင်တို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေအဖြစ်အားကစားသမားအဖြစ်သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ရရှိနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ကြလိမ့်မည်။ ဒါကဟို Steroid တစ်မျိုးဤမျှကာလပတ်လုံးသင်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာအဖြစ်အရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုကယ်တင်တတ်၏။
ပုံမှန်အားဖြင့်, testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်သူကြာကြာအဘို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌တက်ကြွနေဖို့သူတို့ကို enable လုပ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသော Ester နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးပူးတွဲ။ Phenylpropionate4ရက်တွေအကြောင်း5ဖို့မူးယစ်ဆေးရဲ့တက်ကြွအသက်ကိုစောင့်ဖို့ testosterone ဟော်မုန်းတွဲသောဘုံ Ester တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးတက်ကြွစွာ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အသုံးပြုသူများသည်အကြားရှိပါတယ်။ အဆိုပါဆေးဝါးသူတို့ကို, ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်အစွမ်းသတ္တိကိုမြှင့်တင်ရန်ကြွက်သားတည်ဆောက်နှင့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်အခြား steroids အသုံးပြုတဲ့အခါကိုယ့်ကိုကြိုက်ပါကသင်သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးယူပြီး start မတိုင်မီအမြဲဆေးစစ်ဘို့သွားကြဖို့အကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ testosterone phenylpropionate အသုံးပြုမှု တယောက်ကိုတယောက်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ကွဲပြားပေလိမ့်မည်။
ဘယ်လို testosterone phenylpropionate အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
testosterone phenylpropionate (1255-49-8) ကိုယ့်ကတခြားဟိုစတီရွိုက်များကဲ့သို့ပိုမို testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆော်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်း၏လုံလောက်စွာနှင့်တည်ငြိမ်အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်သေချာ။ ဤအအထီးဟော်မုန်းပမာဏသင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်လုံလောက်ရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကအလိုအလျှောက်အကျိုးကျေးဇူးခံစားစတင်ပါလိမ့်မည်, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များမှီနိုင်ပါ။ ဟော်မုန်းကိုလည်းအဆီဆုံးရှုံးမှုတိုးမြှင့်ကြွက်သားထုထည်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အရိုးပွရောဂါထံမှသင်တို့ကာကွယ်ဘို့တာဝန်ရှိသည်။
မည်သည့်ကာယဗလမယ်များအတွက်ပိန်ကြုံသောကြွက်သားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုစလုံးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ testosterone ဟော်မုန်းလည်းမိုးသည်းထန်စွာလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်ပိုပြီးဒါ bulking သံသရာစဉ်အတွင်းတစ်ရှူးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီပေးသည်။ ဤရွေ့ကားဟော်မုန်းအဆီဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကြွက်သားကြီးထွားအဖြစ်ပြုပြင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့အန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) ကိုခညျြနှောငျ။ သို့သော်ပိုကောင်း testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ရလဒ်များကိုအဘို့, သငျသညျသငျ့လျြောသောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူသောက်သုံးသောအတူလိုက်ပါသင့်ပါတယ်။ သငျသညျ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သောက်သုံးသောယူပြီး start တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့သင်တန်းဆရာနဲ့အာဟာရအသိပေးပါ။ သငျသညျနောက်ထပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှောင်ရှားရန်မဆိုပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသတိထားမိသည့်အခါချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
2.testosterone phenylpropionate သံသရာ
testosterone phenylpropionate သင်သံသရာ၏အဆုံးအားဖြင့်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်အရာပေါ်မူတည်ပြီး6ရက်သတ္တပတ်အကြောင်း 8 များအတွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။ သင့်ဆရာဝန်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သံသရာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်တို့အဘို့။ တခါတရံဆရာဝန်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိကို၎င်းသောက်သုံးသောကာလဒါမှမဟုတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ တစ်ဦးကပုံမှန်ဆေးစစ်သံသရာစဉ်အတွင်းဆေးဝါးဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ testosterone phenylpropionate သံသရာကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလာဒ်များအခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏ဆေးဝါးတွေနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများပေါင်းစပ်ကြပါဘူး။
Beginners အနိမ့်ဆေးညွှန်းခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်အတွက်နောက်ပိုင်းမှာချိန်ညှိနိုင်သည့်တိုတောင်းသံသရာနှင့်အတူစတင်ပါရန်အကြံပြုပါသည်။ အဆင့်မြင့် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အသုံးပြုသူများသည် ပို. ပင် 8 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်အများဆုံးကာလမှကပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသင်အကြံပေးမမူလျှင်, အ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သံသရာကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မထားပါနဲ့။ သငျသညျကနျြးမာရေးပြဿနာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါလျှင်တစ်ခါတစ်ရံဆေးပညာသံသရာတစ်ဝက်တစ်ပျက်ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်အမျိုးမျိုးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်; အရှင်သည်သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်မူးယစ်ဆေးသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်လိမ့်မည်ဟုအော်တိုမဟုတ်ပါဘူး။
3.testosterone phenylpropionate ရလဒ်များကို
testosterone phenylpropionate (1255-49-8), သင့်လျော်စွာအသုံးပြုသောအခါ, အပြုသဘောရလာဒ်များကယ်တင်တတ်၏နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ထို့ကြောင့်, လက်ျာသောက်သုံးသော, အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်အရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုအာမခံပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်ဘုံ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ရလဒ်အချို့ကိုပါ၏
ကကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်အတွက်ကူညီပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြွက်သားကြီးထွားမှု, သင်တစ်ဦးကာယဗလမယ်အဖြစ် testosterone phenylpropionate ယူပြီးစတင်သင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကြွက်သားတစ်ကာယဗလမယ်၏အသက်တာ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်သင်ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမြှင့်တင်ရန်, လက်ျာ steroids ယူရန်လိုအပ်ကြောင်းအောင်မြင်ရန်။ တိုင်းကာယဗလမယ်သို့မဟုတ်အားကစားသမားဒီအစွမ်းထက်မူးယစ်ဆေးယူခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည့်ပိန်ကြွက်သားရှိသည်လို။
သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျှံခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့အတွက်ကူညီဖို့ကတည်းကသံသရာဖြတ်တောက်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီအစာရှောင်ခြင်းမီးလောင်ရာမှဦးဆောင်ရသောဇီဝြဖစ်, တိုးမြှင်အဖြစ် testosterone phenylpropionate ဟာအလွန်အစွမ်းထက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြည့်စွက်သည်။ သင်ကအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဖြစ်စဉ်ကိုစွဲစေပါလိမ့်မယ်တခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အတူတကွမူးယစ်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။
quick ကြွက်သားပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်းအများစုကိုကပ်ကာလ၏အားကစားရုံမှာအလေးရုတ်သိမ်းရေးကြောင့်သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေဆန့်နိုင်။ သငျသညျနောကျတွေ့ကြုံခံစားအဆိုပါဝဒေနာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးဆီးတားနိုင်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်က hard သင်အလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်လက်ရန်အဘို့အစေနိုင်သည်။ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ယူပြီးတဲ့အခါမှာမူးယစ်ဆေးဝါးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ငြိမ်းစေလျက်တစ်သျှူးပိုကောင်းစေပါတယ်ကတည်းကသို့သော်, ကြောင်းကိုသင်၏စိုးရိမ်ပူပန်၏အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေအမြဲသင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်သင်သည်သင်၏လိုချင်သောရလာဒ်များရရှိရန်အဘို့အလွယ်ကူစေရန်ခွင့်ပြုလျင်မြန်စွာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေပါလိမ့်မယ်။
ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားတိုးပွါး, ထွက်အလုပ်လုပ်ထိရောက်စွာယှဉ်ပြိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်မရှိခြင်းအမြဲအများအပြားကာယဗလတာဝန်သူတို့ရဲ့အညီရင်ဆိုင်ရသောအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone phenylpropionate သင်သည်တာရှည်နာရီလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုပါရန်သင့်စွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်။
အရိုးစနစ်၏အားကောင်း, အရိုးပွရောဂါများစွာသောလူရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်, ဤမူးယစ်ဆေးဒီအရိုးရောဂါတိုက်ခိုက်နေအတွက်ကူညီပေးသည်။ testosterone phenylpropionate သင့်ရဲ့အရိုးစနစ်ကနျြးမာရေးကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရိုးပွရောဂါလူနာကကူညီရန်ဤမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးပါပြီ။ လေ့လာရေး testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အရိုးသိပ်သည်းဆ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုတိုက်ခိုက်နေများအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပွားဆေးဝါးများ၏တဦးတည်းကြောင်းပြသပါ။
လိင် drive ကိုနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ; တိုးမြှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့လိင်စိတ်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုလည်းတိုးမြှင့်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤ testosterone ဟော်မုန်းကာယဗလနှင့်အနိမ့်လိင် drive ကိုအတူရုန်းကန်တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးစလုံးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန် phenylpropionate စေသည်။ သံသရာ bulking မှာတော့သင့်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုလည်းတိုးတက်နှင့်လွယ်ကူသင်လိုချင်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမှီဖို့အဘို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
testosterone phenylpropionate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
ကိုယ့်ကိုအခြားမူးယစ်ဆေး, testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate နဲ့တူ (1255-49-8) လည်းအများအားဖြင့်ကအလွဲသုံးစားတဲ့သူအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြုံတွေ့ကြောင်းယင်း၏ကျဘက်ကိုရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလျှော့ချချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာအမြဲတမ်းသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သို့သော်လူ့အလောင်းတွေ၏ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်အချို့သောလူတွေကပင်လက်ျာသောက်သုံးသောယူပြီးပြီးနောက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဆေးပညာကြောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတို့ပါဝင်သည်ဘုံ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အချို့သည်;
သင်တို့သည်လည်းဆီးကျိတ်၏ hypertrophy တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်
ထို့အပြင်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားရသောသငျသညျကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကြောင်းအချို့သောအသေးစားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ itching နှင့်ဆေးထိုးဧရိယာတဝိုက်ရောင်ရမ်းခြင်း, တို့ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားရရှိသွားတဲ့လျှင်, သင်၏ဆရာဝန်ကိုသင်စုံလင်သောဆေးတစ်လက် get ကူညီပေးပါမည်။ သတငျးကောငျးကိုသငျသညျအခြိနျမှာသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားလျှင် testosterone phenylpropionate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အများစုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲအထက်သက်ရောက်မှုမဆိုတွေ့ကြုံခံစားလျှင်မူးယစ်ဆေးယူပြီးဆက်လက်မထားပါနဲ့။ တခါတရံကဆေးသိပ်နောက်ကျစတင်သည်လျှင်ပြင်းထန်သက်ရောက်မှု reverse ဖို့စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
4.testosterone phenylpropionate သောက်သုံးသော
လက်ျာသောက်သုံးသောအမြဲသငျသညျအသှေးကိုရလဒ်များကိုနှင့်လက်ျာအချိန်တွင်အာမခံပါသည်။ အဆိုပါအကြံပြု testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သောက်သုံးသော တိုင်းသုံးရက်တခါယူသင့်ကြောင်း 100-200 မီလီဂရမ်ကနေနေကြပါတယ်။ အသစ်ကအသုံးပြုသူများအတွက်ကြောင့်ထို့နောက်အောက်ပါသံသရာအတွက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးသံသရာအတွက်အနိမ့်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူစတင်ရန်အကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ အဆိုပါသောက်သုံးသောတစ်ဦးဆေးထိုးခြင်းနှင့် intramuscularly မှတဆင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။ အများအားဖြင့်, သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. 6-8 ရက်သတ္တပတ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate နှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သငျသညျဆရာဝနျကသင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်, 100 ရက်ပေါင်းလျင် 3mgs ထက်ပင်နိမ့်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူစတင်ရန်သင့်အားအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ Ladies လည်းအထီးဝိသေသလက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးဆဲရှောင်ရှားရန်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သောက်သုံးသောယူရန်အကြံပြုပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, 200 ရက်ပေါင်းနှုန်းအဆင့်မြင့်ကာယဗလသို့မဟုတ်အားကစားသမား 3mgs လိုချင်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်စုံလင်ထိုးကြလိမ့်မည်။ သငျသညျသံသရာဖြတ်တောက်အတွက်သည့်အခါကြွက်သားတည်ဆောက်သို့မဟုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုအဘို့အစဉ်အမြဲပိုပြီးဒီတော့လျော်သောအစားအစာနှင့်အလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်သင်၏သောက်သုံးသောအတူလိုက်ပါ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးနဲ့အခြားဟို steroids အတူသုံးနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းအရည်အသွေးမြင့်ရလဒ်များကိုကယ်တင်တတ်၏။ သံသရာ bulking, သင်သည်အခြား steroids အတူ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သီးနှံများကိုပုံမှနျလိုအပျသျောလညျးသငျဟာအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ရဖို့ကကူညီရန်သင့်ဆရာဝန်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည် overdosing ကတည်းကအပေါငျးတို့သသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်သတိရပါ။
5.testosterone phenylpropionate တစ်ဝက်ဘဝ
ဒါဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ထဲကိုထိုးသွင်းမယ့်တစ်ချိန်က testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate4ရက်တွေအကြောင်း5တစ်ခုတက်ကြွစွာဘဝရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းတစ်ခုတည်ငြိမ်ထောက်ပံ့ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်သုံးရက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကြိမ်ယူရပါမည်။ ဤသည် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate က၎င်း၏ရှည်လျားသောတက်ကြွစွာဘဝကြောင့်အများအပြားကာယဗလများအတွက်တစ်စုံလင်သောဟို Steroid တစ်မျိုးစေသည်။ သငျသညျနောက်တစ်နေ့သောက်သုံးသောယူမတိုင်မီအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်သင့်ဆေးထိုးဧရိယာများအတွက်လုံလောက်သောအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သတိရပါ testosterone ဟော်မုန်းကိုလည်းကြွက်သားသည်အနာပျောက်စေသောဖြစ်စဉ်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးမဆိုအားကစားသမားသို့မဟုတ်ကာယဗလမယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
6.ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် testosterone phenylpropionate
testosterone phenylpropionate အမှုန့် သံသရာဖြတ်တောက်၌ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်စေသည်။ ဒီ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းများ၏တည်ငြိမ်ထောက်ပံ့ရေးနောက်ဆုံးမှာခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချအတွက်အထောက်အကူပြုကြောင်းဇီဝြဖစ်တိုးပွားစေပါသည်။ တစ်ဦးကာယဗလမယ်အဖြစ်, သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မရရှိသငျသညျပိတ်ဆို့စေခြင်းငှါ, ခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အဆီအရေပြားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပ်နှံကြသည်နှင့်ကခက်ခဲသငျသညျအသှေးနှငျ့မြင်နိုင်ပိန်ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးရန်အဘို့အစေနိုင်သည်။ ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, အားကစားသမားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် bulk သံသရာနှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
သငျသညျပိုကောင်းရလဒ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သော Winstrol, Anavar အဖြစ်သံသရာသို့မဟုတ် trenbolone ဖြတ်တောက်အခြားအကောင်းဆုံးဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့အောင်မြင်ရန်ချင်ပေါ် မူတည်. သင့်ရဲ့ဆေးမှူးသင်မလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဆီဖြတ်သကဲ့သို့သင်တို့ကြွက်သားရဖို့ကူညီခွင့်ဖြတ်တောက်သောက်သုံးသော get ကူညီပေးပါမည်။ အားကစားသမားသို့မဟုတ်ကာယဗလမယ်အဖြစ်သင့်ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့, ထို့နောက်သင်လျော်သောအစားအစာအဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူသောက်သုံးသော stacking အဆိုပါ testosterone phenylpropionate အတူလိုက်ပါရန်ရှိသည်။
7.bulking များအတွက် testosterone phenylpropionate
ဒီနေရာတွင်သာဖြစ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းကြွက်သားထုထည်ကိုရဖို့ရန်ဖြစ်သောတဦးတည်းရည်မှန်းချက်, ရှိသည်။ အဆိုပါကာယဗလများသောအားဖြင့်ထို့နောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သော bulk သံသရာနှင့်အတူစတင်ပါ။ အဆင့်မြင့်ကာယဗလလည်းကြွက်သားထုထည်အဆင့်ဆင့်ရရှိထိန်းသိမ်းနည်းမှန်မှန် bulk သံသရာခံယူ။ testosterone phenylpropionate သံသရာ bulking အတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့အားကစားသမားများရလဒ်များအရှိန်မြှင့်ရန်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကြောင့်သီးနှံများကိုပုံမှကြိုက်တတ်တဲ့။ Bulking သံသရာကန့်သတ်ရန်သင့်ကြွက်သားတွေဆန့်နိုင်သည့်မိုးသည်းထန်စွာလေ့ကျင့်ခန်းပါဝင်, သင် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကဲ့သို့လက်ျာဘက်ဖြည့်စွက်စရာမလိုပါလျှင်, သင်ပြင်းထန်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရပေလိမ့်မည်။
ဒါကဟို steroids ကြွက်သားကြီးထွားအဖြစ်တစ်ရှူးသည်အနာပျောက်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ထို့ကြောင့်, သင့်တာကိုရသောအခါ bulking များအတွက် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionateသငျသညျအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြွက်သားအမြတ်နှင့်အမြန်တစ်ရှူးပြန်လည်နာလန်ထူ၏သေချာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းပိုရှည်တက်ကြွစွာဘဝမှဘာသာသည့်ရှည်လျား Ester, ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်သာတစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်သောက်သုံးသောထိုးသွင်းပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးထိုးဒေသများလာမည့်သောက်သုံးသောအဘို့အသွားမီအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခွင့်ပြု။ သင်၏ဆရာဝန်, အာဟာရနှင့်သင်တန်းဆရာတပြင်လုံးကို bulk ဖြစ်စဉ်တွင်သင်သည်ပဲ့ပြင်သင့်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသင် bulk စတင်. သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်မှုများအတွက်သံသရာဖြတ်တောက်ကြသောအခါသူတို့ကပိုဒီတော့သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုသတိထားဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
8.testosterone phenylpropionate အကျိုးကျေးဇူးများကို
testosterone phenylpropionate မှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်နှင့်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသူသည်အသုံးပြုသူများမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုအခြားဟို Steroid တစ်မျိုးကဲ့သို့သင်သည်ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုခံစားဖို့အတှကျ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ထုတ်လုပ်သူနှင့်သင့်ဆေးမှူးများကပေးအသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်လိုက်နာရပေမည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအားကစားနှင့်ဆေးဝါးလယ်ကွင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသော testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာရှာဖွေနေ, သင်သည်များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုပျော်ရွှင်နေကြသည်နှင့်ဤအစွမ်းထက်ဟို Steroid တစ်မျိုးသုံးပြီးပြီးနောက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဖော်ပြကြသည်ကိုသတိပြုပါပါလိမ့်မယ်။ အထင်ရှားဆုံး testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အကျိုးကျေးဇူးများကိုအချို့သည်ပါဝင်သည်:
သင်ဟာကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ Anavar (Oxandrolone) အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို(အသစ်တစ်ခုကို browser tab မှာဖွင့်လှစ်)
testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သုံးပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (1255-49-8) သငျသညျကိုသာတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီဟို Steroid တစ်မျိုးကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများအားဖြင့်အများဆုံးနှစ်သက်မူးယစ်ဆေးတွေထဲကစေသည်။ testosterone phenylpropionate သင့်ရဲ့ဆေးထိုးဒေသများသင်နောက်တစ်နေ့ထိုးယူမတိုင်မီအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးသော,4ရက်တွေအကြောင်း5အဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တက်ကြွရှိနေမည်။
testosterone phenylpropionate စျေးကွက်အပေါ်အနည်းအစာရှောင်ခြင်း-သရုပ်ဆောင်ဟို steroids ကြားတွင်ယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာ 8 ရက်သတ္တပတ်၏အမြင့်ဆုံးအဘို့ဤမူးယစ်ဆေးယူလိမ့်မယ်, သင်သံသရာဖြတ်တောက်သို့မဟုတ် bulking ထိုသို့အသုံးပြုနေသည်ရှိမရှိသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုမှီပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်မူးယစ်ဆေးယူပြီးပြီးနောက်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့မဟုတ်တိုးတက်မှုပေါ် မူတည်. အဆိုပါသံသရာဆန့နိုငျသျောလညျးနေဆဲဟိုစတီရွိုက်၏ကမ္ဘာ့အတိုဆုံးသောက်သုံးသောသံသရာတစ်ဦးရှိပါတယ်။
အားကစားသမားသို့မဟုတ်ကာယဗလမယ်အဖြစ်, သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်စွမ်းအင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ပါတယ်။ testosterone phenylpropionate နှစ်ဦးစလုံးသင်တန်းနှင့်ပြိုင်ပွဲ၌သင်တို့၏ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီမူးယစ်ဆေးလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်သို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းကြွက်သားဝေဒနာနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အိပ်မည်ဟုအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလကူညီပေးနေအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ သင်အရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုခံစားရန်အားလုံးသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သံသရာဖြည့်စွက်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံကိုသင်ပြိုင်ပွဲနှင့်သင်တန်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုယူနိုင်ဖို့ခွန်အားတီထွင်ကြပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့သက်ရောက်မှု၏ကုသမှု
ဆေးပညာလောကရှိဆရာဝန်များထိုကဲ့သို့သောအခြားရောဂါများအကြားတွင်ယောက်ျား, အရိုးပွရောဂါအတွက်အနိမ့်လိင် drive ကိုအဖြစ်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုနှင့်အတူလူနာကုသရန် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကိုအသုံးပြုပါ။ testosterone ဟော်မုန်း၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်, အထူးသဖြင့်ယောက်ျားအတွက်, testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူကြွလာ။ အထီးဝိသေသလက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးဆဲနှောင့်နှေးလာသောအခါဥပမာ,, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအကြံအဥာဏ်များကအများဆုံးနှစ်သက်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးဟို steroids အမျိုးမျိုးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတူပါလာပေမယ့်သင်မှန်ကန်စွာယူသည်မှန်လျှင်, testosterone phenylpropionate ဆေးညွှန်းတာအလွန်အနည်းငယ်မျှသာပြင်းထန်သက်ရောက်မှုမှဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလွန်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူစျေးကွက်အပေါ်အနည်းငယ်ဟို steroids တဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ testosterone phenylpropionate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အများစုမူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားသောသူတို့အားသာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တာရှည်သင်တို့ရှိသမျှသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်လိုက်နာအဖြစ်, သငျသညျသှားဖို့ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျအပေါငျးတို့သ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်.
9.testosterone phenylpropionate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အများအားဖြင့်, များစွာသောဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှတဆင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြ။ ရုံနဲ့အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများထံမှကွဲပြားတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအသုံးပြုသူအများစုအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များမှီကူညီရန်အသုံးပြုရန်ရှိရာအားကစားကမ်ဘာပျေါတှငျပိုပြီးဒါမူးယစ်ဆေးဖြင့်ကယ်လွှတ်ရလဒ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ အားကစားသမားများအတွက်ဆေးသံသရာ bulking နှင့်သံသရာဖြတ်တောက်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အဆီလည်းမီးလောင်နေစဉ်အတွင်းကြွက်သားထုထည်ကိုရဖို့ရန်အများအပြားကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဆေးပညာလောကရှိ, testosterone phenylpropionate အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Medical အများစုအထီးအတွက်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု၏ကုသမှု၌ဤမူးယစ်ဆေးဝါး၏အောင်မြင်မှုကိုအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းကဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအနိမ့်လိင် drive ကို, အရိုးပွရောဂါနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအခြားသူတွေအကြားစကားသံကိုပိုမိုနက်ရှိုင်း, မုတ်ဆိတ်အဖြစ်အထီးဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှောင့်နှေးသွားစေနိုင်သည်။ လူနာထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှာလည်းအမျိုးမျိုးသောရောဂါများအောင်မြင်သောကုသမှုပြီးနောက် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကိုခြီးမှမျးနေကြသည်။
10 အတွက် 2019 လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids ရော်အမှုန့်(အသစ်တစ်ခုကို browser tab မှာဖွင့်လှစ်)
ဒါ့အပြင်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အတူအဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်း၏ညည်းညူ။ သို့သော်သူတို့ overdosing သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ၏အလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့လှိုင်းလေထန်စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်၏အဆွေခင်ပွန်းဘို့အလုပ်လုပ်တယ်သောမူးယစ်ဆေးကိုအလိုအလျောက်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကအမြဲသူတို့ကဆေးညွှန်းကိုယူပြီးခင်ဆေးစစ်ခံယူဖို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသုံးပြုသူများကအကြံပြုသည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုများအတွက် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သောက်သုံးသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သင်၏ဆရာဝန်ပါဝင်မှအစဉ်အမြဲကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါပဲ။
10 ။ရောင်းရန် testosterone phenylpropionate
အများအပြား testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ပေးသွင်းနှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏သံသရာ၏အဆုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုအရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုအာမခံပါလိမ့်မယ်တဲ့အရည်အသွေးမြင့်မူးယစ်ဆေးရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်သို့သော်သင်သည်အလွန်သတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။ သင်အွန်လိုင်းကိုမတှေ့တိုင်း testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ထုတ်လုပ်သူစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်, အချို့ငွေရှာဖို့ပဲရှိပါတယ်, သူတို့သင်သည်သင်၏ဆေးညွှန်းကိုယူပြီးပြီးနောက်ရရှိမည်ရလဒ်ဂရုစိုက်ကြပါဘူး။ သင်တို့ရှေ့မှ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ဝယ်ဖို့ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့သုတေသနပြုလုပ်ပါ။ သင်မည်သည့်အမိန့်ကိုလုပ်ရှေ့တော်၌ထို testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Read အဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ratings မှာရှာဖွေနေ။
ကျနော်တို့ဒေသအတွက်ဦးဆောင် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ-friendly ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံး၏နှစ်သိမ့်ကနေသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ် desktop ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာအားလုံးထုတ်ကုန်ကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းသေချာပါစေ။ သင်လုပ်နိုင်သည် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အမှုန့်ကိုဝယ် အမြောက်အများအတွက်သို့မဟုတ်သင့် bulk သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာဘို့ပဲအလုံအလောက်။ နေပါစေသင်မူးယစ်ဆေးရနိုင်ပုံကိုအလွယ်တကူသတိရပါ, သင့်ဆရာဝန်၏လမ်းညွှန်မှုမပါဘဲယူပြီး start ပါဘူး။
အပြင်ကျနော်တို့အမြဲသူတို့သည်ငါတို့ပလက်ဖောင်းတခုတခုအပေါ်မှာအမိန့်လုပ်မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်မိမိတို့၏နိုင်ငံတွင်းရှိဥပဒေများမဆိုဟို Steroid တစ်မျိုး purchasing သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အကြံပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန် purchasing များအတွက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူဒုက္ခ၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ထားလိုမဟုတ်ဘူး။ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ကာယဗလဝယ်ယူသည့်အခါမဆိုကန့်သတ်ရှိပါတယ်ရှိမရှိသင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူအတည်ပြုပါ။ သင်တို့သည်လည်းအချိန်မရွေးသင်တစ်ဦးအမိန့်သို့မဟုတ်အခါသင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများစေရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီနဲ့စားပွဲပေါ်မှာကိုယ်စားလှယ်များအမြဲသငျသညျအစေခံရန်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
11 ။ကာယဗလများအတွက် testosterone propionate vs testosterone phenylpropionate
သူတို့နည်းတူအလုပ်လုပ်ကတည်းကနှစ်ခုမူးယစ်ဆေးအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကဟို steroids ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့4ရက်တွေအကြောင်း5၏တူညီသောဝက်ဘဝကိုမျှဝေပါ။ သငျသညျနှစျယောကျ၏လည်းကောင်း ယူ. နေဆဲတူညီသောရလာဒ်များအရရွေးချယ်နိုင်သည်။ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate နှင့် testosterone ဟော်မုန်း propionate နှစ်ဦးစလုံးကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သံသရာဖြတ်တောက်ဘို့ထိုသူတို့ကိုကူညီဖို့ကာယဗလအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်သောအလှည့်ရလဒ်များကိုအတွက်တိုးတက်လိင် drive ကို, ကြွက်သားကြီးထွားမှု, နှင့်အလွန်အကျွံခန္ဓာကိုယ်အဆီ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းပမာဏမြှင့်တင်ရန်။ သူတို့ကသူတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်သောခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ကတည်းကအတော်များများအားကစားသမားလည်းသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နှစ်ခုမူးယစ်ဆေးဝါးမဆိုအသုံးပြုပါ။
testosterone phenylpropionate နှင့် testosterone ဟော်မုန်း propionate သာသူတို့ရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကွာခြားပေမယ့်သူတို့ကဝိသေသလက္ခဏာများအများစုမျှဝေပါ။ နှစ်ခုဟို steroids များအတွက်သောက်သုံးသောလည်းတစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ယူရပါမည်။ သို့သော်ပိုကောင်းသောရလဒ်များကိုဘို့နှစ်ခုနှင့်အတူသုံးစွဲဖို့မူးယစ်ဆေးပေါ်တွင်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးယူမှမဆိုအဓိပ္ပာယ်စေမည်မဟုတ် testosterone phenylpropionate အတူတူသံသရာအတွင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်း propionate ။ တစ်ကြိမ်မှာယူပြီးပိုပြီးအကျိုးရှိလိမ့်ပေမယ့်အမြဲသင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာနှစ်ဦးစလုံးဟို steroids ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အယ်လ် Osta, R. , Almont, တီ, လုံ့လဝရိယ, C တို့, Hubert, N. , Eschwège, P. , & Hubert, ဂျေ (2016) ။ ဟို steroids အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း။ အခြေခံပညာနှင့်လက်တွေ့ andrology, 26(1),2။
Tretzel, အယ်လ်, သောမတ်စ်, အေ, Geyer, အိပ်ချ်, Gmeiner, G. အ, Forsdahl, G. အ, ပေါ့ပ်, V. ... & Thevis, အမ် (2014) ။ ဟို Steroid တစ်မျိုး Ester ထိန်းချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ doping ထဲတွင်အခြောက်တို့၏အသွေးအစက်အပြောက်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆေးဝါးနှင့်ဇီဝဆေးဝါးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဂျာနယ်, 96, 21-30 ။
Bhawani, SA, Sulaiman, O. , Hashim, R. , & အီဘရာဟင်, MN (2010) ။ စတီရွိုက်၏ထူးအိမ်သင်-layer ကို chromatographic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ဆေးဝါးသုတေသနအပူပိုင်းဂျာနယ်, 9(3) ။
Solimini, R. , Rotolo, MC, Mastrobattista, အယ်လ်, Mortali, C တို့, Minutillo, အေ, Pichini, အက်စ်, ... & Palmi, ဗြဲ (2017) ။ doping အတွက်ဟိုအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်၏တရားမဝင်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် Hepatotoxicity ။ EUR ဗြာ Med Pharmacol သိပ္ပံ, 21(1 ပျော့ပျောင်း), 7-16 ။